Ikhaya elikhulu leholide eSchilcherland labantu abangu-2 - 8. - I-Airbnb
Ikhaya elikhulu leholide eSchilcherland labantu abangu-2 - 8.
Sankt Oswald ob Eibiswald, Steiermark, i-Austria
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Gitta & Jörg
Indlu yethu yokuziphekela itholakala ku-800 m endaweni ephelele ebheke eningizimu, izungezwe indawo enhle. Ukubuka kumnandi. I "Eckhansl" ifanele izivakashi ezinezingane nabangane abanoboya (izinja). Uma uthanda ukuthula nemvelo, uze endaweni efanele.
I-Eckhansl nayo inekhefi kanye nedamu lezinja. Olunye ulwazi ngalokhu luyatholakala ku-inthanethi kwa-Eckhansl
Sikhokhisa inkokhelo yesikhathi esisodwa engu-€ 30 yezilwane ezifuywayo.
I-Eckhansl inikezela ngamakamelo ama-double angu-4 abanzi ane-TV (esakazeke phansi kanye ne-attic) kanye nekhishi elikhulu-igumbi lokuhlala. Uzothola itafula le-foosball endaweni engaphansi. Ungasebenzisa futhi umshini wokuwasha nokomisa nganoma isiphi isikhathi (engaphansi). Iqembu lokuhlala kanye ne-grill (ukhuni / amalahle) likulindile engadini enkulu.
Okuwukuphela komakhelwane ipulazi laseMalli, elihlale lisipha thina nezivakashi zethu ubisi olusha.
Ibungazwe ngu-Gitta & Jörg
Njengoba sihlala endlini esakhiweni esisodwa, sihlala siseduze kwakho ngezeluleko nezenzo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sankt Oswald ob Eibiswald namaphethelo